ह्वात्तै मूल्य बढेका कम्पनीहरू कहाँ छन् ? कति छ मूल्य ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyह्वात्तै मूल्य बढेका कम्पनीहरू कहाँ छन् ? कति छ मूल्य ?
ह्वात्तै मूल्य बढेका कम्पनीहरू कहाँ छन् ? कति छ मूल्य ?
पछिल्लाे समय नेपाली शेयर बजारमा लगातार आइपिओ आइरहे । जसमा लगानीकर्ताहरूकाे चाप उच्च भइरह्याे । केही समय अघिसम्म जति माग गर्याे उति नै आइपिओ हात पर्थ्याे । तर अहिले त्याे अवस्था छैन । १० कित्ता आइपिओ हात पर्न पनि भाग्यकै साथ हुनुपर्ने अवस्था आइपुगेकाे छ ।
अघिल्लाे वर्ष यहि समयमा नै पुनर्बिमा कम्पनीकाे आइपिओ जारी भएपछि बढ्न थालेकाे लगानीकर्ताकाे चाप केही समयअघि रेकर्ड राख्दै आइपिओ जारी गरेकाे इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे आइपिओ जारी हुँदा आकासिएकाे थियाे ।
लगानीकर्ताहरूकाे संख्या बढ्दै गएपछि लगानी पनि बढ्दै गएकाे छ । जुनसुकै कम्पनीकाे पनि आइपिओ दाेस्राे बजारमा काराेबार सुरू भएपछि मूल्य आकासिने गरेकाे छ । चाहे त्याे एन् आरआइसि हाेस , चाहे ज्याेति लाइफ हाेस , चाहे माउन्टेन इनर्जी नै किन नहाेस ।
यसरी करिब एक वर्ष अघिदेखि नेप्सेमा सूचिकृत भएर मूल्य आकासिएका कम्पनीहरूकाे मूल्य अहिले कति छ ? भनेर हामीले हेर्ने प्रयास गरेका छाैँ । २०७८ साल बैशाख २७ गते बजार बन्द हुँदा ती कम्पनीहरूकाे मूल्य यसप्रकार रहेका छन्ः
NRIC – 1496
AJOD INSURANCE- 834
NICLBSL – 1780
CHANDRAGIRI HILLS – 1845
PRAVU LIFE INSURANCE – 795
JYOTI LIFE INSURANCE- 801
Previous articleरूरू जलविद्युतकाे मूल्यमा सर्किट , यस्ताे छ कारण
Next articleबढ्यो सुनको मूल्य